ဈေးဝယ်သည့်အခါအသုံးများသော အင်္ဂလိပ်စကားစုများ - Myanmar Network
Posted by Soe Soe Win on August 9, 2013 at 14:21 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို အင်္ဂလိပ်စကားတတ်ရင် အပြင်ထွက်ပြီး ဈေးဝယ်လို့ရတတ်ပါတယ်။ စကားမတတ်လည်း ၀ယ်ချင်တဲ့ပစ္စည်းကို လက်ညှိးထိုးပြပြီး ၀ယ်လို့ရပေမယ့် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အသုံးဝင်တဲ့ စကားစုအချို့ကို လေ့လာထားခြင်းအားဖြင့် ဈေးဝယ်ရတာ အများကြီးပိုပြီး လွယ်ကူသွားတတ်ပါတယ်။ တစ်ခုခုပြပါလို့ ပြောချင်ရင်အောက်ဖော်ပြပါစကားစုတွေကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။
Can you show me the…, please.
Could you show me the …, please.
Would you be so kind to show me the…, please.
I’d like to see the…, please.
စမ်းဝတ်ကြည့်ချင်ရင်တော့ အခုလို ပြောနိုင်ပါတယ်။
Can I try it/them on, please ?
ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီဟာ(တွေ)ကို စမ်းဝတ်ကြည့်လို့ရမလား။
Could I try it/them on, please ?
ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီဟာ(တွေ)ကို စမ်းဝတ်ကြည့်လို့ရမလားခင်ဗျာ^ရှင်။
Is it ok if I try this/these on ?
Where can I try it/them on ?
Where are the changing rooms, please ?
အရွယ်မတူတဲ့ ဒါမှမဟုတ် အရောင်မတူတဲ့အ၀တ်အစားတွေကို လိုချင်လို့ရှိရင် အောက်ဖော်ပြပါ စကားစုတွေကို သုံးပြီး မေးနိုင်ပါတယ်။
Do you have it/them in size … ?
Can I try the larger/smaller one(s), please ?
Do you have it /them in different colour, please?
၀ယ်တော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါ ဒီလိုပြောနိုင်ပါတယ်။
Wow, this one is great, I’ll take it!
ဟာ၊ ဒီဟာကတော်တော်ကောင်းတာဘဲ၊ ဒါဘဲယူပါမယ်။
Can I buy the…
How much is/ are the… I’d like to buy it/them.
…… က ဈေးဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ။ ၀ယ်ချင်ပါတယ်။
http://www.commonenglishphrases.com မှ Marina Educo11 ၏ Common English Phrases for Buying ကိုမှီငြမ်းထားပါသည်။
ဘယျနိုငျငံမှာမဆို အင်ျဂလိပျစကားတတျရငျ အပွငျထှကျပွီး ဈေးဝယျလို့ရတတျပါတယျ။ စကားမတတျလညျး ဝယျခငျြတဲ့ပစ်စညျးကို လကျညှိးထိုးပွပွီး ဝယျလို့ရပမေယျ့ အောကျမှာဖျောပွထားတဲ့ အသုံးဝငျတဲ့ စကားစုအခြို့ကို လလေ့ာထားခွငျးအားဖွငျ့ ဈေးဝယျရတာ အမြားကွီးပိုပွီး လှယျကူသှားတတျပါတယျ။ တဈခုခုပွပါလို့ ပွောခငျြရငျအောကျဖျောပွပါစကားစုတှကေိုသုံးနိုငျပါတယျ။
စမျးဝတျကွညျ့ခငျြရငျတော့ အခုလို ပွောနိုငျပါတယျ။
ကြေးဇူးပွုပွီး ဒီဟာ(တှေ)ကို စမျးဝတျကွညျ့လို့ရမလား။
ကြေးဇူးပွုပွီး ဒီဟာ(တှေ)ကို စမျးဝတျကွညျ့လို့ရမလားခငျဗြာ^ရှငျ။
အရှယျမတူတဲ့ ဒါမှမဟုတျ အရောငျမတူတဲ့အဝတျအစားတှကေို လိုခငျြလို့ရှိရငျ အောကျဖျောပွပါ စကားစုတှကေို သုံးပွီး မေးနိုငျပါတယျ။
ဝယျတော့မယျလို့ ဆုံးဖွတျတဲ့အခါ ဒီလိုပွောနိုငျပါတယျ။
ဟာ၊ ဒီဟာကတျောတျောကောငျးတာဘဲ၊ ဒါဘဲယူပါမယျ။
…… က ဈေးဘယျလောကျရှိပါသလဲ။ ဝယျခငျြပါတယျ။
http://www.commonenglishphrases.com မှ Marina Educo11 ၏ Common English Phrases for Buying ကိုမှီငွမျးထားပါသညျ။
Permalink Reply by Mi Mi Thaw on August 10, 2013 at 20:46
Permalink Reply by Soe Soe on August 11, 2013 at 13:49
Permalink Reply by Win Win Latt on August 12, 2013 at 17:10
USEFUL FOR US!
Permalink Reply by Khine Zin Oo on August 13, 2013 at 10:58
Thank you so much for your sharing. I get so many English vocabulary.
Permalink Reply by Nanpohmu Nanpohmu on November 14, 2014 at 15:46
Permalink Reply by Hla Min Oo on December 17, 2014 at 17:51
Permalink Reply by MiMi on December 17, 2014 at 21:14
Permalink Reply by Khin Mon Thet on December 23, 2014 at 14:24
Permalink Reply by mi mi on February 6, 2015 at 12:27
Permalink Reply by mayri on May 16, 2015 at 17:35
I like it.It is very useful for me.So thank you very much.
Permalink Reply by MTK on June 18, 2015 at 17:57
Permalink Reply by Thu Zar on July 6, 2015 at 22:01